आज २०७७ कात्तिक ३० गते आइतबारको राशिफल « Khabarhub
आज २०७७ कात्तिक ३० गते आइतबारको राशिफल
आज २०७७ कात्तिक ३० गते आइतबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
शरीर आलश्य भएको महशुष हुनेछ । स्वास्थ्यमा गडबढ हुन सक्छ । खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुहोला । आर्थिक पक्ष सबल रहने छ । पारिवारिक सद्भाव रहनेछ ।
आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउनेछ । ब्यापार व्यवसाय राम्रो हुनेछ । स्वास्थ्य सुधार हुँदै जानेछ । जग्गा जमिन तथा अचल सम्पत्तीको योग छ । छिट्टै अरूको विश्वास गर्नाले धोका पाउने सम्भावना पनि रहेकाले सतर्क रहनुहोला ।
आकस्मिक धन लाभ हुन सक्नेछ । बैदशिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । पढाइमा राम्रै प्रगति हुनेछ । आफन्तबाट टाढिनु पर्न सक्छ । आफ्ना योजना गोप्य राखेर गरेको काममा सफलता मिल्ला ।
कतै लामो दूरीको लाभदायी यात्रा सफल बन्नेछ । निर्णय गर्नुअघि अग्रजसको सल्लाह लिँदा उपयुक्त हुनेछ । पितासँगको सम्बन्ध सुमधुर बन्नेछ । मुद्दा मामिलामा सफलता मिल्नेछ । आर्थिक कारोबार गर्दा बिचार पुर्‍याउनुहोला ।अनावश्यक विवाद पर्न सक्छ ।
पारिवारिक वातावरण तपाईंको अनुकूल छैन । खर्च अनुरूपको आम्दानी नहुँदा आर्थिक पक्ष कमजोर रहनेछ । बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्नेछ। चिताएको काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कशिलो हुनेछ।
स्वास्थ्य सुधारोन्मुख हुँदै जानेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । आफन्तको सहयोग रहनेछ । रतिरागको योग देखिएकाले मन उत्ताउल हुन सक्छ । छिट्टै अरूको विश्वास गर्दा धोका पाउने सम्भावना छ । अध्ययन अध्यापनमा सफलता प्राप्त हुनेछ । सरसामान हराउन सक्ने भएकाले साबधानी अपनाउनु होला ।
प्रकाशित मिति : ३० कार्तिक २०७७, आइतबार ५ : २५ बजे